कर्म र भाग्यले जु’रेको सं’योग ,दाजु आईजिपी भाई एसएसपी ! – Khabarhouse
कर्म र भाग्यले जु’रेको सं’योग ,दाजु आईजिपी भाई एसएसपी !
Khabar house | २९ माघ २०७६, बुधबार ०९:४६ | Comments
काठमाडौं : प्यूठानको झिम्रुकमा जन्मिएका ठाकुर ज्ञवाली नेपाल प्रहरीको २७ औं आईजिपी भए । यो ज्ञवाली परिवारको लागि गर्वको विषय बन्यो। भद्र र सालिन स्वभावका ज्ञवाली सहज रुपमा महानिरीक्षन बनेका छन्। विगतमा जस्ता महा निरीक्षक नियुक्तिमा वि’वाद पनि भएन ।अर्काे रमाइलो पक्ष के छ भने ज्ञवालीका चार दाजुभाई मध्ये एक भाई पनि प्रहरीमै छन् उनी पनि भावी आईजिपीका दाबेदार हुन् ।
उनका भाई श्याम लाल ज्ञवाली महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन् । उनी २०५१ साल चैत ५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरीमा बढुवा भएका हुन् । एसएसपीमा उनी आफ्नो ब्याचमा चौथो नम्बरमा छन् । यसअघि पहिलो नम्बरमा भएका उनलाई सर्वेन्द्र खनालले पछि पारेका थिए । अहिलेकै कानूनी व्यवस्था अनुसार अबको दुई ब्याचपछि उनकै टोलीबाट प्रहरी ने’तृत्व च’यन हुने छ ।
जसमा दाजुभाई नै आईजिपी बनेर इतिहास लेख्ने अवसर समेत उनीहरुलाई छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । उनी आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा थिए । यसपटकको महानिरीक्षक नियुक्तिमा विग तमा जस्तो वि’वाद भएन । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख रहेका ज्ञवाली मंगलबार मात्र विराटनगरबाट काठमाडौं आ’एका थिए ।